တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်က အရှေ့အာရှ စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုအတွက် တိုက်တွန်းပြောကြား - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အရှေ့အာရှ၏ ဒေသတွင်း စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၊ စွမ်းအင်၊ အစားအသောက်နှင့် ငွေကြေးမျက်နှာစာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ပြီး စိန်ခေါ်မှုများကို ပူးတွဲတုန့်ပြန်ရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်က အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်၌ တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။၂၄ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ + တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ (10+3) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအား ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ကျင်းပစဉ် ဝန်ကြီးချုပ် လီက ပေကျင်းမြို့မှ မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရန် ပိုမိုပွင့်လင်းပြီး အားလုံးပါဝင်သော အရှေ့အာရှဒေသအတွက် “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အားလုံးပါဝင်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ အရှေ့အာရှ ပြန်လည်နာလန်ထူမှု မြှင့်တင်ဖို့နဲ့ ဒေသတွင်း ရေရှည် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းသိမ်းဖို့၊ အကျပ်အတည်းကို တုန့်ပြန်ရာမှာ ရင့်ကျက်တဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်” ဟု လီက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်အား ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော ၂၄ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ + တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် တောင်ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ပေကျင်းမြို့မှ တက်ရောက်နေသည်ကို အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အရှေ့အာရှတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှု တိုးတက်ရေး၊ ဒေသတွင်းစီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှုနက်ရှိုင်းရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းရေး၊ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေး မြှင့်တင်ရေး၊ ငွေကြေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် အစိမ်းရောင် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရေး အပါအဝင် အဆိုပြုချက် ၆ ခုကို လီက တင်ပြခဲ့သည်။
အရှေ့အာရှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အရေးပါသောရလဒ်အဖြစ် ဒေသဆိုင်ရာ ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး (RCEP) သည် မကြာမီ အသက်ဝင်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း လီက ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ သဘောတူညီချက် ဆောလျင်စွာ အသက်ဝင်လာစေဖို့ အလျင်အမြန်ကြိုးပမ်းကြဖို့လိုပြီး လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု အဆင့်မြှင်တင်ဖို့နဲ့ အဆင့်မြင့်မားပေါင်းစည်းရေးကို လိုက်နာဖို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် RCEP အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံမျှဝေမှုကဲ့သို့ စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု အစီအစဉ်များအား လက်ခံပြုလုပ်သွားမည်ဟု ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှုအရ ကူးစက်ရောဂါတုန့်ပြန်ရေးအတွက် 10+3 ဒေသတွင်းစွမ်းဆောင်မှု မြှင့်တင်ရန် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေများဆိုင်ရာ ဆေးဝါးထောက်ပံ့ရေးအရန်ငွေ ထူထောင်မှု အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက်လည်း လီက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ 10+3 ဖိုရမ်အား လက်ခံကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အရှေ့အာရှ၏ စက်မှုလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ ခရီးသွားစင်္ကြံအစီအစဉ်မူဘောင်အား 10+3 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးသို့ တိုးချဲ့ရေး နှင့် ရှိနှင့်ပြီးသား “မြန်ဆန်သောလမ်းကြောင်းများ” နှင့် “အစိမ်းရောင်လမ်းများ” အား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးချရေး ပံ့ပိုးလျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအနေဖြင့်ဆိုရပါမူ တရုတ်နိုင်ငံသည် 10+3 လူငယ်သိပ္ပံပညာရှင်များဖိုရမ်နှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအား ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်းခြားမှု ပေါင်းကူးရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်မည့် အခြားအစီအစဉ်များကို လက်ခံကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် cyberspace စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ ဒီဂျစ်တယ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးတွင် ပါဝင်သောနိုင်ငံများအားလုံးနှင့်အတူ ကူးလူးဖလှယ်မှုများ တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လီက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဒေသတွင်း စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်ရန် အာဆီယံ + ၃ အရေးပေါ်ဆန် အရန်ထားရှိမှုအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ဖြည့်သွင်းခြင်းအတွက်လည်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ထို့နောက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသည့် ခေါင်းဆောင်များက 10+3 ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ယန္တရားသည် အကျပ်အတည်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရခြင်း၊ အရှေ့အာ ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ခြင်းတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်ကို သဘောတူခဲ့ကြသည်။
လာမည့်နှစ်သည် 10+3 ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ၂၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အရှေ့အာရှ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရေးနှင့် အရှေ့အာရှဒေသနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကျန်ဒေသများတွင် ဘုံတိုးတက်မှုနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ခေါင်းဆောင်များ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွက် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များနှင့် လူငယ်များအကြား စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကိုလည်း အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Chinese premier calls for East Asia’s economic integration
BEIJING, Oct. 27 (Xinhua) — Chinese Premier Li Keqiang on Wednesday called for advancing East Asia’s regional economic integration and jointly responding to challenges on the public health, energy, food and financial fronts to promote development.
“We need to make the most of the mature mechanisms of cooperation and rich experience in crisis response, … to boost an all-round and balanced recovery of East Asia and safeguard long-standing prosperity and stability in the region,” foramore open and inclusive East Asia that enjoys sustainable development, Li said.
“We need to hasten work for the agreement to take effect as early as possible, and continue to advance free trade and pursue higher-level integration,” he said, adding that China will host capacity building programs such as personnel training and experience sharing on RCEP implementation.
In terms of public health governance, Li called for accelerating the building of the 10+3 Reserve of Medical Supplies for Public Health Emergencies to enhance the region’s capacity for epidemic response.
China will hosta10+3 forum for cooperation on industrial and supply chains, Li said on East Asia’s industrial cooperation.
China supports extending the ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework to all 10+3 countries and better harnessing the existing “fast tracks” and “green lanes,” he said.
Leaders attending the meeting agreed that the 10+3 cooperation mechanism has played an important role in coping with crises and promoting East Asia’s regional development.
Photo : Chinese Premier Li Keqiang attends the 24th ASEAN Plus China, Japan and ROK Summit via video link, at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Oct. 27, 2021. (Xinhua/Yao Dawei)